VLC ku siinayaa hab fiican si aad xaalkaa video qalabka fudud. Waxaa laga yaabaa in qalab premium-tafatir ah laakiin sameeya shaqada aasaasiga ah ee jarida / falinjeeerka video ah . Waxa kale oo aad iyaga ku milmaan kartaa in la abuuro xiiso leh a video .
Qeybta 1:? Sida loo gooyay video in VLC
Qeybta 2: Isticmaalka line amarka kala ah video
Qaybta 1aad: Sida loo gooyay video in VLC?
User Celcelis ahaan si fudud u isticmaali kartaa shaqeynta video goynta si loo badbaadiyo ama u wadaagno. Tallaabooyinka waa sahlan oo si fudud loo.
1. Fur video la ciyaaryahan VLC oo taga si aad u eegto menu in la furo kontoroolha Advanced.
2. Isticmaalka bar xaaladda maraan si upka ah naggadi oo video ah oo guji badhanka record on.
3. Hadda ciyaari video ah si ay u gaaraan qayb dhammaadka video ah. Si aad u joojiso duubay, riix badhanka rikoorka mar kale. Your video badbaadi doonaa in lagu mutaysanayo gudasho la'aanta badbaadiyo goobta VLC oo sida caadiga ah My Videos on Windows.
Habkani waa ku dhowaad isku mid ah labada daaqadaha iyo computer Mac. Just ogaan default mooyee goobta videos on Mac iyo daaqadaha ku kala duwan yihiin sida ay.
Qeybta 2: Isticmaalka line amarka kala video ah
Isticmaalka Line Command waa hab fiican oo lagu kala video ah leh fudud sadarro dhawr ah. Habkani waxaa kaliya loogu talagalay dadka isticmaala sare sida ay ku lug waxgarasho wanaagsan ee amarradayda iyo qaabab video iwm habkan, aad isticmaalayso si degdeg ah amarka u furo VLC iyo Terminal ay dhacdo Mac. Waxay hore waxaa laga heli karaa habka. Waxaad ka heli kartaa hoos imaneysey barnaamijyada ee Windows ama ka raadi 'Terminal ee Mac.
1. Daahfurka degdeg ah amarka u daaqadaha iyo terminal u Mac. Maadaama aan la isticmaalayo si degdeg ah amarka u baahnaan doontaa inaad si toos ah barnaamijka si ay meesha VLC la geliyo nidaamka. Sida caadiga ah ee daaqadaha waa C: Barnaamijka \_ Files \_ VideoLan \_ vlc.exe iyo Mac, / codsiga / biilasha.
2. Aan ka soo qaadno aad isticmaalayso terminal. Ka dib marka aad furay vlc isticmaali amarrada soo socda si ay u dhinto video ah.
Wax muhiim ah in aan halkan ku aragto waa in aad yeelan doonaan in ay soo galaan magaca file ah in aad rabto in aad si sax ah u wada "filename =", waxaad u baahan doontaa in la qeexo waqti bilowday in ay "ka bilaabi =" oo geli bareeg ilaa oo ka dhamaado video ah.
Hubi inaad taqaan waxyaabaha aasaasiga ah ee amarka hor inta aadan isticmaalin habkan.
Qeybta 3: Wondershare Video Convertor Ultimate
Maxaad samayn haddii aadan awoodin in aad raacdo tilmaamaha adag ku xusan? Interfaces line Command ma aha qof kasta oo si weyn u dhumin kartaa waqti aad. Ay u badan tahay ka wanaagsan Waxaad noqon doontaa wax kale haddii aad isku dayaya inuu sameeyo xirfado shaqo ee casriga ah.
Haddii aad isticmaalayso video in aan la taageeray on VLC markaas waxaad isticmaali kartaa a convertor qolo saddexaad ee video in - sida convertor Video ah Ultimate. Waxaa la og yahay in ay taageeraan ku dhowaad dhammaan qaabab video iyo Soha oo lagu casriyeeyo cusub. Waxa ay noqon doontaa kaaliyaha fiican ee ciyaaryahan VLC halka tafatirka. Waxaa badasha 30 jeer ka dhakhsi badan Converter kasta ama nafteeda VLC. Xataa iyada oo qaabab culus sida 4K noocyada format, software this waddaa macaan oo uu idin ​​wada siiyo natiijada tarin. Hadda waxaad aad u bedeli karaan videos isticmaalaya Wondershare Video Converter kama dambaysta ah oo wax ka bedel ku ciyaaryahanka VLC.
> Resource > Video > Sida loo jar Videos on VLC?